News - Olee otú ime ma ọ bụrụ na ụgbọ ala isi ọnwụ?
Olee otú ime ma ọ bụrụ na ụgbọ ala isi ọnwụ?
Kpọtụrụ ebe ndozi
Hazie igodo ohuru
Ọ bụrụ n ’ịhọpụta itinye igodo ọhụrụ na igodo ọhụrụ, mgbe ahụ ịkwesịrị inye ụgbọala ahụ na ID nke onye nwe ya. Dị ka ụdị dị iche iche si kwuo, ebe nrụzi ahụ chọrọ ka onye nwe ya nye paswọọdụ mgbochi-oji 17 maka igodo nhazi. Okwuntughe a abụghị akara eze, mana okwuntughe nyere onye nwe ya mgbe ịzụrụ ụgbọ ala ọhụrụ. Maka ụfọdụ ụdị, ụlọ ọrụ mmezi na-enye ndị na-emepụta ụgbọ ala asambodo ụgbọ ahụ na onye nwe ya. Emeputa ajuju mgbochi ohi paswọọdụ nke nhazi isi site na nchekwa data na faksị ya na mmezi ebe.
Mgbe ha nwetara paswọọdụ a, ebe nrụzi ahụ chọrọ onye nwe ya ka ọ nye ọnụ ọgụgụ isi igodo iji hazie igodo igwe ọhụrụ. Ọ bụrụ na enweghị ọnụ ọgụgụ profaịlụ eze, ị nwere ike ịjụ ọnụọgụ profaịlụ eze site na nchekwa data. N'otu oge ahụ, ebe nrụzi ahụ nwere ike igbanwe kọmpụta kọmpụta onboard iji tọọ igodo ụgbọ ala furu efu dị ka igodo iwu na-akwadoghị, mana ọ bụrụ na enweghị ike ịmalite ụgbọ ala ahụ, igodo ahụ furu efu ka ga-emepe ụzọ. Lee ihe ncheta maka ụgbọ ala ndị nwe ya: ozugbo igodo ụgbọ ala ahụ furu efu, ọbụlagodi na edozila igodo ọhụụ, ị kwesịrị ịkpachara anya ka ị ghara ịchekwa ihe bara uru n'ụgbọala ahụ.
Biko dochie mkpọchi ụgbọala ozugbo na ebe nrụzi Ebe ọ bụ na enwere ihe ize ndụ nke ịhapụ ọdịnaya nke ụgbọ ala ahụ mgbe ị na-agbanwe igodo ahụ, ịgbanwe mkpọchi ga-ewepụ ihe egwu a kpamkpam. Agbanyeghị, ọnụ ahịa igbanwe mkpọchi ahụ dị ukwuu karịa igodo ọhụrụ ahụ. Modelsdị ụfọdụ na-eji otu igodo ahụ maka ọnụ ụzọ, ọnụ ụzọ akpa akpa, ọnụ ụzọ oghere aka na okpu tank mmanụ. N'oge a, ọ bụrụ na edochi mkpọchi ụgbọala niile, a na-atụle mkpọchi ndị kwesịrị ịgbanwe.
N'ikwu okwu n'ozuzu, ọnụego nke igodo ọhụrụ dịgasị iche site na 300 yuan ruo 2,000 yuan, mana ọnụahịa nke imegharị mkpọchi ụgbọ ala nwere ike ịbụ ugboro 4 ruo 5 nke nke igodo nnọchi, na igodo nnọchi ya na-abụkarị Ọ dịghị n'ime Ihe ndị ụlọ ọrụ inshọransị kwuru, yabụ ọnụ ahịa dị elu.
N'ikwu okwu n'ozuzu, igodo ọhụụ nwere ike ịkwado na awa ole na ole, mana ụfọdụ ụdị okomoko dị elu chọrọ oge ka ukwuu, n'ihi na ụfọdụ ụgbọ ala ndị dị elu kwesịrị ibubata usoro nke ịtọgbọ ma tụfuo isi ihe mbụ na saịtị mmepụta. Carsgbọ ala ndị dị elu nwere ọkwa dị elu nke mgbawa paswọọdụ na nha na ọnụ ahịa dị elu.